Dagaalo Gaystay Khasaare Dhimasho iyo Dhaawac oo Barqanimadii Maanta ka Dhacay Magaalada Wajeer
dagaalo ayaa barqanimadii magaalada wajeer..
Date: 2012-01-12 06:00:11
Wararka naga soo gaaraya Magaalada Wajeer ee Waqooyiga Bari ee Dalka Kiinya ayaa sheegaya in barqanimadii Kooxo Hubaysan ay weerar ku qaadeen Ciidamo Kiinyaan ah oo Magaaladaas ku sugnaa.
Weerarkan ayaa sida la sheegay waxaa ku dhintay Illaa Seddax Sarkaal oo ka tirsan Ciidamada Kiinya halka tiro intaa ka badanina ay ku dhaawacmeen.
Af hayeenka Xukuumadda Kiinya Mr Ereg oo goor dhaweyto Saxaafadda la hadlay ayaa qiray dagaalkaas barqanimadii maanta ka dhacay gudaha Magaalada Wajeer ee Gobolka Waqooyi bari.
Af hayeenka oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegey in Ciidamadoodu ay iska difaaceen dibna isaga waabiyeen kooxihii duulaanka ku soo qaaday magaalada Wajeer isagoona dagaalkaa ku eedeeyay in ay soo qaadeen Xarakada Shabaab.
Af hayeenka ayaan sheegin si rasmi ah in Dagaalkaasi ay ka danbeeyeen Xarakada Shabaab wuxuuse farta ku fiiqay in ay haayeen Rag ka soo tallaabay dhinaca Xadka Soomaaliya isagoona intaa raaciyay in ay adeegsanayeen Hubka fud fud iyo walxha qarxa.
Mr Ereg af hayeenka ayaa sheegey inuu jiro khasaare ballaaran oo ay gaarsiyeen Ciidamadooda dhinicii dagaalka soo qaaday walow uusan si rasmi ah u sheegin Khasaaraha ay gaysteen ciidamadooda.
Ma aha markii u horeeyay ee Magaalooyinka ku yaala waqooyiga Bari ee Kiinya oo dagaalo noocaan ah ay ka dhacaan dhawaan ayaanay ahayd markii sidan oo kale Weeraro qaraxyo ah laga fuliyay isla magaalada Wajeer.
Magaalooyinka kale ee Mandheera iyo Dhagaxleey ayaa sidoo kale weeraro kuwaa la mid ah lagu qaaday taasoo lala beegsanayay Ciidamada ammaanka ee dalka Kiinya.
Tan iyo markii Ciidamada Kiinya ay soo galeen gudah dalka Soomaaliya waxaa soo badanayay qaraxyada iyo weerarada gaadmada ah ee ka dhacayay gudaha dalka Kiinya.
Dhawaan ayay ahayd markii xukuumadda Kiinya ay soo saartay baaqyo ku aadan Dagaalo laga filan karo Xarakada Shabaab oo ka dhaca gudah wadanka Kiinya taasoo ciidamadooda Feejignaan dheeraad ah la galiyay.
Si kastaba Dagaalka Wajeer ee maanta ayaa imaanayaa xilli Xiisadda Xadka ee Kiinya iyo Soomaaliya ay Cirka isku sii shareereyso isla markaana ay sii kordhayso Cabsida halkaa ka jirta.